[Imidlalo ye-Linux: 3] I-Minecraft | Kusuka kuLinux
U-IvanLinux | | Imidlalo
Sawubona, namuhla ngikulethela lesi Sibuyekezo mayelana noMi-inecraft, umdlalo wevidiyo wokwakha ozimele kuJava naku-OpenGL, wohlobo "lomhlaba ovulekile" noma uhlobo lwe-sandbox ekuqaleni olwenziwe nguMarkus "Notch" Persson, futhi kamuva lwakhiwa yinkampani yakhe, iMojang AB.
Ikhishwe esidlangalaleni ngoMeyi 17, 2009 kunguqulo yayo ye-alpha, ngemuva kwezinguquko ezahlukahlukene inguqulo yayo ephelele ikhishwe ngoNovemba 18, 2011.
Inyanga ngaphambi kokukhishwa kwenguqulo yayo ephelele, ngo-Okthoba 18, 2011, kukhishwe inguqulo ye-Android, kwathi ngoNovemba 17 wonyaka ofanayo kukhishwe inguqulo ye-iOS.
NgoMeyi 9, 2012 kukhishwe uhlobo lomdlalo we-Xbox 360 ne-Xbox Live Arcade. Zonke izinhlobo ze Minecraft thola izibuyekezo eziqhubekayo selokhu zaqala.
En Minecraft Abadlali bangenza ukwakha basebenzise ama-cubes anezinhlaka ezakhiwe ngakuthathu, futhi bangahlola nemvelo, baqoqe futhi benze izinsiza, kanye nokulwa nezinye izenzo.
Ekuqalisweni kwawo kokuhweba, umdlalo unezindlela ezimbili eziyinhloko: Ukusinda, lapho abadlali kumele bathole izinsiza zokugcina impilo yabo nendlala; futhi nokudala, lapho abadlali banokufinyelela okungenamkhawulo kuzinsizakusebenza zegeyimu, amandla okundiza futhi angadingi ukugcina impilo yabo nendlala.
Kungakhathalekile ukuthi lezi zindlela zomdlalo, ubunzima bomdlalo bungachazwa futhi, imodi ethulile kunazo zonke ilele enokuthula, ngokungafani nobunye ubunzima, ayivumeli izilo ukuthi zivele emdlalweni ezingasebenzisana nomdlali.
Kukhona nemodi yomdlalo wesithathu, ebizwa nge-hardcore, efana nemodi yokusinda, nomehluko wokuthi ingadlalwa kuphela kubunzima obukhulu kakhulu nokuthi umdlali unempilo eyodwa kuphela, ngakho-ke lapho efa umdlalo uyaphela.
Minecraft Kungumdlalo womhlaba ovulekile, ngakho-ke awunayo inhloso ethile, uvumela umdlali inkululeko enkulu ekukhetheni ukuthi angadlala kanjani, ngaphandle kwalokhu umdlalo unezimpumelelo ezithile ezingafinyelelwa.
Imodi yemidlalo ezenzakalelayo ingumuntu wokuqala, yize abadlali bekwazi ukuyishintshela kumuntu wesithathu.
Umdlalo ugxila ekubekweni kwamabhulokhi, ngoba lokhu kwenziwa ngezinto ezingama-cubic ezintathu-ntathu, ezibekwe kuphethini yegridi engaguquki.
La macube noma amabhlogo ikakhulukazi amele izinto ezahlukahlukene zemvelo, njengomhlaba, itshe, amaminerali, iziqu zemithi, phakathi kokunye.
Abadlali bakhululekile ukuzungeza imvelo yabo futhi bayiguqule ngokwakha, ukuqoqa nokuhambisa amabhulokhi akha umdlalo, ongabekwa kuphela ngokuhlonipha igridi yomdlalo ehleliwe.
Ekuqaleni komdlalo, umdlali usezweni elakhiwe yi-algorithm, elikuvumela ukuthi kungapheli.
Umdlali ukhululekile ukuhambahamba ngezindawo, ezakhiwe ngama-biomes ahlukahlukene, kufaka phakathi izingwadule, amahlathi, izilwandle, amathafa namathafa amakhulu.
Umdlalo unomjikelezo wawo wesikhathi sosuku nobusuku, okuwukuthi usuku emdlalweni lulingana nemizuzu engama-20 empeleni.
Umdlalo uhlanganisa nezidalwa nezinhlamvu ezingadlaleki, ezihlangene ezibizwa ngokuthi izixuku, lezi zidalwa zingaba nokuthula, njengezingulube, izinkukhu nezimvu, lapho umdlali angathola khona kalula ukudla nezinsiza.
Izidalwa ezinobutha kubadlali nazo ziyavela kulo mdlalo, njengeZombies, izicabucabu ezinkulu namathambo, lezi zidalwa zivela kuphela ebusuku noma ezindaweni ezimnyama, phakathi kwalezi zilo kukhona izidalwa zemidlalo ezihlukile, ezinjengezidalwa ezinwabuzelayo, eziqhuma lapho zisondele kumdlali , noma i-enderman, ongakwazi ukuqoqa amabhlogo kanye ne-teleport.
Ukwenza imephu akukhiqizwa ngokuphelele ngasikhathi sinye, kepha kuhlukaniswe kwaba yizinqamu ("izihlanganisi", "izihlanganisi") zamabhulokhi ayi-16 × 16 ngokuvundlile. Ama-chunks asondele kumdlali afakwa kwimemori. Njengoba ihamba, ama-chunks amasha akhiqizwa futhi engezwa emephini.
Imodi yokusinda ("ukusinda") iyimodi yangempela yomdlalo futhi isethwe empilweni yangempela ngenkathi iqukethe nenganekwane, abadlali banebha yokuphila yezinhliziyo eziyi-10.
Kufanele udale itafula lokuzakhela ukwakha ama-pickaxes, izinkemba, amageja ... izilo ezinenzondo zibahlasela ngokuzenzekelayo (ngaphandle uma lo mdlalo ukwimodi enokuthula), futhi bangalimaza (kulokhu nakwezinye izindlela, njengokuwa, udaka , njll.) bese ufa.
Futhi banenqwaba yendlala, okumele bayigcwalise ngokuthola nokudla ukudla (kusuka ezilwaneni, ama-zombies noma izitshalo), kanye ne-bar yokuhlangenwe nakho, etholwe ngokunqoba izixuku (izilo), nangokunquma amabhulokhi amaminerali (amalahle, i-lapis lazuli, i-redstone, i-emerald nedayimane) noma uyincibilikise (insimbi negolide)
Amabhulokhi ahlukahlukene nezinto ziyenziwa noma ziyaqoqwa bese zigcinwa ohlwini lwabadlali. Amabhulokhi adinga ukuthi kukhishwe imizuzwana embalwa, ngaphezu kwamathuluzi athile ngokuya ngecala.
Ngokuthola izinsizakusebenza ezingcono, ukhulisa ubuningi kanye nekhwalithi yamathuluzi (uma kuba ngcono, iphuka izinto eziningi uma kukhethwa noma ikwenza ngokushesha kuzo zonke izimo ngaphandle kwegeja, kanye nokuhlala isikhathi eside) nezinto lokho kungenziwa ngobuciko.
Kukhona nemodi enokuthula (imodi enokuthula) iyafana nokusinda kepha azikho izilo futhi uthola impilo uma ulahlekelwa yiyo.
1 Abaphathi KuMinecraft
2 Umbono wami:
Kukhona abaphathi ababili:
Ukubuna: Kudingeka amakhanda amathathu e-Whites Skeleton atholakala ku-dimension «Nether» namabhulokhi amane eSoulsand, nawo atholakala eNether ukuze ambize.
Amabhuloki eSoulsand kufanele abekwe ukuze abe sesimweni se- «T», bese ubeka amakhanda ngaphezulu kwawo, ukuze iWhiter iphume ekugcineni.
I-Ender Dragon: Itholakale kusilinganiso se- "End". Ukungena udinga ama-Portal ayi-12 ekugcineni namehlo angu-12 ender, futhi kumele abekwe ukuze enze isikwele esingenawo amakhona, bese esifaka kuwo.
Ungudrako omnyama, nokuthi ngokuyihlula, lapho yafa khona ingosi yomhlaba izokwakhiwa. Uma uyifaka, izikweletu zizovela (ukwehlula i-Ender Dragon kubhekwa njengokuphela komdlalo).
Umdlalo omuhle kakhulu, onconywe kakhulu, ngezinto ongapheli okufanele uzenze 😀
[3 kwangu-5] Imidwebo [/ 3 kwezingu-5] [5 kwezingu-5] I-Gameplay [/ 5 kwezingu-5] [5 kwezingu-5] Ukusebenza [/ 5 kokungu-5] [2 kokungu-5] Ukukhululeka kwabaqalayo [/ 2 kwabangu-5] [3 kwangu-5] Ukuzinza [/ 3 kwangu-5] [5 kokungu-5] Ukubongwa Komuntu [/ 5 kwangu-5] [4points] [/ 4points]
Sebenzisa iJava ne-OpenGL
Iwebhusayithi esemthethweni: http://www.minecraft.net/
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Imidlalo » [Imidlalo ye-Linux: 3] I-Minecraft
ngakho-ke yilokho okumayelana nakho.
Ukukhangisa kwamahhala kweMojang hahahaha
Imidwebo ingathuthukiswa kusetshenziswa i-Optifine 😀
Futhi iphakethe elihle lokuthungwa lika-512 × 512 eliguqulwe ukwenziwa kweJava 😀
Ngiyabonga, ngizonamathela ngama-rigs wezinduku ze-XD
Okubi ukuthi kwenziwa eJava (yize kuyi-cross-platform), ngithola ukusebenza okungalungile, neze "kugijime" ku-3fps
Ngiyawuthanda lo mdlalo, noma ngabe kuyisidina ukuwudlala wedwa; noma;
Yidlale kubadlali abaningi, ulwazi lomdlalo lushintsha ngokuphelele ... noma ungafaka nokuqamba bese uqala ukusebenzisa ama-mods, lapho bengeza khona izikhali ezintsha ezitimeleni 😀
Ngidlala i-minetest, iyafana kepha ibhalwe ngo-cy mahhala, awuqhathaniseki nowokuqala kepha uma uya ekhasini layo inamaphakethe amaningi wamamodeli nokuthungwa engikushoyo uma kwenzeka unentshisekelo.
Ngiyabonga kepha ngizonamathela kwi-TERA nase-GUILD WARS 2.
Ngidlala iMinecraft kusukela ngo-1.2.5 futhi bengilokhu ngibona ukuthi ukusebenza kweJava kusalungile kangakanani uze ungeze i-Optifine mod (yomibili kuPentium4 eneNvidia kanye ne-i3 ene-Intel, ngiyavuma ukuthi bangamakhompyutha alungile impela) kepha konke futhi ngaleyo ndlela ikhipha i-10 ~ 15fps yayo futhi nge-optifine inyukela kuma-25fps futhi iyadlalwa.
Ngiyawuthanda umdlalo ngaphezu kwakho konke wokwazi ukwakha noma yini engiyifunayo kokubili ekusindeni (uthola ukwaneliseka kokuyakha ngezindlela "zakho") nangokwakha.
Ku-1.7 ukusebenza kuhle kangangokuba kuyama ukuthi ngine-optifine
Ake sibheke ukuthi ngabe i-OpenJDK iyathuthukisa noma yonakalisa ukusebenza kukaMinecraft.
Ngiyidlala nge-OpenJDK futhi izwa ukuthi imanzi kakhulu kune-Windows XP (angisasebenzisi iWindows)
Iqiniso ukuthi linginika ukusebenza oketshezi kakhulu kunasemafasiteleni
Umdlalo engiwuthandayo 😀
Ithiphu: Ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ku-Arch nakwezinye izinto (njengeManjaro) kufanele uqale ufake amaphakethe we-java-runtime, openal kanye ne-xorg-server-utils… nokufaka i-Forge (ivumela ukusebenzisa ama-mods) kufanele ufake iphakethe le-scala .
Kuhle kakhulu. Ake sibheke ukuthi ngingawudlala lo mdlalo (okokugcina ngiwuzamile, bekungicela ukuthi ngikhokhe kusengaphambili ukuze ngikwazi ukuwudlala).
Ama-Euro angama-20, eshibhile kakhulu? https://minecraft.net/store
Kulowo mdlalo, kuwukuphanga .., kuwufanele ucishe ucishe ufane nowamasipala wokugcina we-XD
Ukubuyekezwa kumahhala kusuka ku-Alpha -> Beta -> RC -> Okokugcina (Ngisho nezinguqulo zokuhlola) :), ngimi kahle ukuhlawula lokho (noma ukulanda itaringa xD) kusuka ku-1.6 kuye ku-1.7 bangeze izinto ezinhle ... kakhulu kushibhe umdlalo bese ukhononda: /
I-PS: Inani lama-mods ne-ResoursePacks liyamangalisa! kimi umdlalo onama-mods amaningi.
Ndoda, uma kubonakala kukuhle kuwe ukuthi ukhokhele lokho ngomdlalo ngemidwebo yangaphambi kokudlala1 kulungile ... yama-mods, ihluzo ezingcono futhi kuyajabulisa futhi akubaluleki kangako nge-XD
Ngokuthanda umbala, akunjalo?
Angikho emidlalweni enehluzo ezinhle kakhulu, ngithanda i-FF7 (Final Fantasy 7) noma i-FF9 ukudlala umdlalo we-mocosoft: Halo
Ake ngiqale kabusha i-PC yami okwesikhashana ukufaka iMinecraft engxenyeni yami noDebian Wheezy (ngimane nginakekele ukwahlukaniswa kweWindows Vista ebengikudebeselele isikhathi se-loooong).
Umdlalo omuhle futhi uma kufanelekile ukuwukhokhela.
Ngihlala noNaruto Shippuden: UN3 Full Burst.
Kunohlobo lwe-clone enelayisense ye-LGPL, iMintest ibizwa ngokuthi: http://minetest.net/.
Sengiqalile ukuyidlala kepha angazi okuningi ... Ngakho-ke angazi ukuthi kunokwehluka okuningi maqondana neMinecraft
IMinecraft, ungayibheka njengomdlalo ngomunye wemiphakathi emikhulu yomsebenzisi neyomodoli. Ukusebenza kwenguqulo ye-PC kushiya kungathandeki. Ngakolunye uhlangothi, inguqulo yamaThebhulethi (i-ARM) iku-C noma ku-C ++ futhi isebenza kahle kakhulu.
Ngazi i-minecraft maphakathi nonyaka owedlule futhi ngingaqinisekisa ukuthi abadlali abaningi bawusebenzisa ngokunenzuzo lo mdlalo weSandBox ongajwayelekile. Ngokwengeziwe phawula ukuthi ngiphatha i-server lapho sisebenzisa khona iBukkit (http://dl.bukkit.org/) okuyi-server version ye-minecraft Open Source ene-api esiza ukwandisa ukusebenza komdlalo ngaphandle kokuguqula iklayenti le-minecraft le-Vanilla (elisemthethweni).
Ngingakufunda lokhu ku-wikipedia. Sicela ungakopishi unamathisele kuleli khasi, siwumphakathi futhi asifuni ukuthi i-google isibone
Umbhalo uyatholakala ngaphansi kwelayisense le-Creative Commons Attribution Share Alike 3.0; Bangasebenzisa izigaba ezingeziwe. Funda imigomo yokusetshenziswa ukuthola eminye imininingwane. http://es.wikipedia.org/wiki/Minecraft
noma yimiphi imibuzo?
Ngilande i-minetest, kepha angazi ukuthi ngenzeni i-xD
Imidwebo 3 kwezingu-5? kuphi? ngisho ne-Doom inemidwebo engcono futhi ineminyaka engama-20 ubudala